Mooge/HIBF - Maalinta afraad - Sabti 25 Julaay 2009
Maalinta Afraad - Sabti 25 Julaay 2009
Guriga Shaqalaha, Waqtiga 09:00
Dhacdada Kowaad: Sahaminta ardayda ee Buugaagta. Waxa hagaysa Farduus S Dirir Waqiga 9:00 – 10:00
Dhacadadani waxay ahaanaysaa sahaminta buugagga oo loo abaabulay ardayda dugsiyada oo Buugaagta ku daawanaya carwada, iyagoo is bedbedalaya ayaa kooxo ka kooban 30 – 40 arday oo macallimiintoodu la socdaan booqanayaan carwada. Dhacdadan waxa loogu talogalay arday ka socota dugsiyada iyo jaamacadaha kala duwan, waxana looga jeedaa in ardayda lagu jiheeyo lana baro buugagga cusub iyo qorayaashooda. Daniel De Simone wuxuu la kulmi doonaa ardeyda Jaamacadaha iyo dugsiyada sare.
Dhacdada Labaad: Bandhig Buug waxa hagaya Sayid M. Yuusuf - Waqtiga 10:00 – 11:00
Dhacdadan laba qoraa ayaa shaqooyinkooda ku soo bandhigaya. Fadhiga hore waxa lagu soo bandhigayaa silsiladdii la magac baxaday Deeley oo dhowaan la daabacay buug koobaya maansooyinkaas oo uu isku dubbariday Boobe Yusuf Ducaale, qoraaga labaad waa Maxamed Baashe oo soo bandhigaya buuggiisa cusub Hal Aan Tebayey Taariikh nololeedkii marxuum Xaaji Aadan Afqalooc. Waxa intaas wehelinaya doodo iyo su’aalo.
Dhacdada Saddexaad: Akhriska iyo Naadiyada Akhriska ee Somaliland. Waxa hagaya –Mustafe Aadan Nuur- Waqtiga 11:00 – 12:00
Qaybta ay ka qaadan karaan Jaamacaduhu kobinta Akhriska Mubarik Ibrahim Aar, Guddoomiye ku xigeenka Jaamacadda Hargeysa. Waxa ka qaybqaadanaya Maxamed Ibraahin (Faaiidada Akhriska), Cabdalla Cali (Sideed wax u akhriyi lahayd) iyo Nimco Maxamed Faarax (Akhriska faaiida leh iyo ka aan faaiidada lahayn). Waxa kale oo ka qayb qaadan doonaa kulankan dadwayne u badan naadiyada akhriska Somaliland oo waydiimo iyo warcelin isula qaadaa dhigi doonaa mowduuca kulankan ay kasoo jeediyeen martidu magacaabani.
Dhacdada Afraad: Bandhigga buugaag cusub - waxa hagaya Aden H Cali - Waqtiga 16:00–17:00.
Waxa jiraya soo bandhigid iyo ka faallood buugaggii la daabacay sannadkii tegay oo ay ka hadlayaan qorayaashu. Waxa galabtaas waxqabadkoodii iyo buugtoodii soo bandhigaya Dayib Askar oo soo saaray Buugaagta Habeen Qurux, Riyadii Warsame iyo Xasan Cabdi Madar oo ah qoraaga Barbaarsame iyo Nabaadiino, Sayid Axmed oo qoray Somaliland:lixdankii iyo xilligii ka horreeyey iyo Mustafe Aadan Nuur oo uu soo wakiishay Axmed-Kayse Cali Rooble si uu usoo bandhigo buuggiisa cusub Hal kaga dayo. Qorayaal kale ayaa dhacdadan goobjoog ku ahaan doono si ay ugu dhiirigeliyaan dadka carwada yimid inay badansadaan akhriska buugaagta.
Dhacdada Shanaad: Bud-dhigga Xafladda Sheeko iyo Shaahid, Hage Rashiid Gadhweyne. Siciid Jaamac wuxuu ka hadli “Maxaa loogu baahanyahay curin” 19:00 - 21:30
Tartan sheeko gaaban ah oo loogu magac daray sheeko iyo shaahid ayaa ka mid noqon doona dhacdooyinka ugu muddakarsan ee Carwada Buugagga Caalamiga ee Hargeysa. Ujeedada tartan suugaaneedkan laga leeyahayna waxay tahay in la dhiirigeliyo lana xadanteeyo hibada qoraal ee da’ yarta iyo qorayaasha soo shaac baxaya. Dhacdadan waxa si rasmi ah loogaga dhawaaqayaa abaalmarinta Sheeko iyo Shaahid, taas oo ay weheliso ka qaybgalka dad waaweyn oo ay ka mid yihiin boqorka cuudka Soomaaliyeed Maxamed Ismaacill Xudeydi, iyo dar kale oo qurbaha ka imanaya sida fannaanka caanka ah Lafoole oo dhacdadan marti ka noqonaya.